ကိုရိုနာကူးစက်ရောဂါ ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး၊ ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေး၊ တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် ၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲကာလများတွင်အထောက်အကူပြုစေရန်အတွက် ရက္ခိုင့်တပ်တော်သည် ညီနောင်မဟာမိတ်များဖြစ်ကြသော MNDAA (ကိုးကန့်)၊ TNLA( တအာင်း) တို့နှင့်အတူတကွ တစ်ဖက်သတ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲခြင်းအား ထပ်မံကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် လက်နက်ကြီးများဖြင့် ရပ်ရွာများကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ရေတပ်စစ်သင်္ဘောများပေါ်မှ မြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက်လက်နက်ကြီး၊လက်နက်ငယ်များဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းများကြောင့် အရပ်သားပြည်သူလူထု( ကလေး၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသမီးကိုယ်ဝန်ဆောင်များ) များထိခိုက်၊သေဆုံးသည့်အရေအတွက်မှာ ပိုမိုမြင့်တက်လျက်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် အရပ်သားပြည်သူလူထုများအနေဖြင့် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ စစ်သဘောၤများသွားလာနေသည့်အချိန်များ၌"စောင့်ကြည့်စနစ်တစ်ခု"ထားရှိပြီး စစ်သဘောၤများပေါ်မှ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေသည့်လက်နက်ကြီး၊လက်နက်ငယ်များအန္တရာယ်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန် သတိထားပြုလုပ်သင့်ကြောင်း သတိပေးအပ်ပါသည်။ မြစ်ကမ်းဘေးအနီးတည်ရှိသော ကျေးရွာများ၏နေအိမ်များတွင် လုံခြုံသောဗုံးခိုကျင်းများကို ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားကြပါရန်ကိုလည်း အသိပေးတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
(၅) စက်တင်ဘာလ(၈) ရက်နေ့၊နံနက်(၉) နာရီ(၄၉) မိနစ် တွင်မြေပုံမြို့နယ်၊ ညောင်ခတ်ကန်( ညောင်ကန်) ကျေးရွာအတွင်းသို့ စစ်ရာဇဝတ်တပ် လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် နယ်ချဲ့မြန်မာ့တပ်မတော်၏ တပ်မ(၆၆) လက်အောက်ခံတပ်ရင်း( အမည်စုံစမ်းဆဲ)၏ "နယ်ခြားတောင်" ၌ စခန်းချတပ်စွဲထားသည့် တပ်စခန်းတစ်ခုမှ မည်သည့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးများဖြင့် တမင်တကာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် အကြိမ်(၁၅) ကြိမ်ခန့်တောက်လျောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ညောင်ခတ်ကန်(ညောင်ကန်) ကျေးရွာအတွင်းမှ အပြစ်မဲ့အရပ်သား(၄)ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကာ (၁၁) ဦးမှာလက်နက်ကြီးစထိမှန်၍ အသေးစား၊အလတ်စား၊ အပြင်းစားဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်အထိ အခြားတစ်ဦးမှာ သတိမရသေးဘဲ သတိမေ့မြောလျက်ရှိနေသေးသည်။
(၁၃)စက်တင်ဘာလ(၁၆) ရက်၊ နေ့လည်(၁၂) နာရီခန့်အချိန်တွင်လည်း ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ ဒိုးတန်းရွာ၏ အနောက်တောင်ဖက်(၁.၅) ကီလိုမီတာအကွာအဝေးရှိ မိမိတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား စစ်ရာဇဝတ်တပ် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ အင်အား(၂၀၀) ခန့်ပါ ခလရ(၂၃၃)/ ခလရ(၂၆၃)/ ခမရ(၁၁၈) တို့ပါဝင်သောပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းမှ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာသောကြောင့် (၁) နာရီ(၃၀) မိနစ်ကျော်ကြာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲအတွင်း ရန်သူ့ဖက်မှ မျက်မြင်(၁၂) ဦးသေဆုံးကာ ဒဏ်ရာရသူ(၁၀) ကျော်ရှိခဲ့သည်။ မိမိတို့ဖက်မှလည်း ဒဏ်ရာရသူအချို့ရှိခဲ့သည်။
(၁၄) နယ်ချဲ့ဖက်ဆစ် စစ်ရာဇဝတ်တပ် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် လက်နက်ကြီးစခန်းများ၊ တပ်ရင်းဌာနချုပ်များ၊ စစ်သင်္ဘောများပေါ်မှလက်နက်ကြီးများဖြင့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။မြန်မာ့တပ်မတော်၏ လက်နက်ကြီးကျည်များသည် အမျက်တောင်ရွာ( ရသေ့တောင်မြို့နယ်) ညောင်ကန်ရွာ( မြေပုံမြို့နယ်)၊ သင်္ဂနက်ကျေးရွာ(ကျောက်တော်မြို့နယ်)၊ ဂုပ္ပီထောင့်(ကျောက်တော်မြို့နယ်)၊ အောင်ဇေကုန်းကျေးရွာ( ရသေ့တောင်မြို့နယ်)၊ လမုတပင်ကျေးရွာ( ကျောက်တော်မြို့နယ်)၊ ရွှေလောင်းတင်ကျေးရွာ( ရသေ့တောင်မြို့နယ် အတွင်း ကျရောက်ပေါက်ကွဲမှုများရှိခဲ့သည်။
အာရက္ခစစ်သည်အချို့ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် အသက်ပေးဆပ်စွန့်လွှတ်ခဲ့ရသူအချို့ရှိခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲများအတွင်း ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာ တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ခဲ့သော အာရက္ခစစ်သည်တော်များအား လေးနက်စွာ မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်သည်။
တောင်ကုတ်မြို့နယ် NLD အဖွဲ့ဝင်(၃)ဦးအား ခေါ်ဆောင်ခြ . . .
မြန်မာ့တပ်မတော် (ခေါ်) ဖက်ဆစ်နယ်ချဲ့ အကြမ်းဖက်တပ်၏ . . .
Battle News in Arakan on 14 October 2020
Battle News in Arakan on 13 October 2020
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၁၄) ရက်၊ ရခိုင်ပြည်တို . . .
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၃) ရက်၊ ရခိုင်ပြည်တိ . . .
အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်လာခဲ့သော ကာယကံရှင်"အနျနာမူလာ" . . .
အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်လာခဲ့သော ကာယကံရှင်"အဒူဟာလီ" ၏ . . .